China Right Angle Prism, Right Angled Prism, Right Angle Prism Mutengesi
Tsanangudzo:Right Angle Prism,Yakarurama Angled Prism,Kurudyi Angle Prisms,Optical Prism,,
 HomeProductsOptical PrismRight Angle Prism
Right Angle Prism (Total 7 Products)
Zvigadzirwa zve Right Angle Prism , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Right Angle Prism , Yakarurama Angled Prism vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Kurudyi Angle Prisms R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
UV yakasanganisa Silica Right Angle Prism
Tsika yakaitwa kurudyi kona prism ine buri
80mm Hukuru hukuru kurudyi angle prism
Zinc Selenide ZnSe kurudyi kona prism
Micro kurudyi kona prism
N-BK7 Kurudyi angle prism
Kana iwe uchida kukwidziridzwa kwepamusoro muiyo ultraviolet bhendi kana coefficient yakadzika yekuwedzera kwekushisa, unogona kusarudza UV yakasanganiswa nesilica kurudyi-kona prism. Ultraviolet giredhi yakasanganiswa silica ine yakakwira...
Realpoo Optics inogona kupa yakakosha kurudyi angle ma prism. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi Dhayamita: 2-100mm Dhiimendi Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Pamusoro pemhando: 60/40 Angle Kushivirira: <3 arcmin Bvisa Aperture:> 90% Pamusoro...
Right kona prism ine yekuratidzira kupfeka pane hypotenuse. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.2mm ~ 300mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.03mm Pamusoro pemhando: 60/40, 40/20 kana zvirinani Angle Kushivirira: <3 arcmin Bvisa...
80x80x80mm yakakura saizi kurudyi angle prism. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 80x80x80mm Dhiimendi Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Pamusoro pemhando: 60/40 Angle Kushivirira: <3 arcmin Bvisa Aperture:> 90% Pamusoro Flatness: λ / 8, λ /...
Right kona prism muZnSe zvinhu. Magadzirirwo: Chinyorwa: ZnSe Dhayamita: 2-100mm Dhiimendi Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Pamusoro pemhando: 60/40 Angle Kushivirira: <3 arcmin Bvisa Aperture:> 90% Pamusoro Flatness: λ / 8, λ / 4 Bevel:...
Kune Micro kurudyi angle prism, hushoma saizi yatinogona kugadzira ndeye 0.2mm. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.2mm ~ 300mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.03mm Pamusoro pemhando: 60/40, 40/20 kana zvirinani Angle Kushivirira: <3...
Kurudyi-rekona prism ndiyo yakajairika mhando prism. Inoshandiswa kutungamirazve danda remwenje pamadhigirii makumi mapfumbamwe kubva munzira yechiitiko kana kushandiswa se 180 beam retro-reflector. Ivo anowanzo akaputirwa neakasiyana machira...
China Right Angle Prism Vatengi
Kurudyi-rekona prism ndiyo yakajairika mhando prism Inoshandiswa kutungamirazve danda remwenje pamadhigirii makumi mapfumbamwe kubva panongedzo yechiitiko kana kushandiswa se 180 danda retro-inoratidzira. Ivo vanowanzo kuvezwa nemhando dzakasiyana-siyana dzekupfeka kuti vagadzire cubic beam splitters uye mavara ekuparadzanisa machubhu anoshandiswa mune akasiyana maitiro ekuratidzira.
BK7, B270, Borosilicate, fused silica or other optical glass
A=B=C or on your request
≤2'', ≤5'', ≤10'', ≤30'' ,≤1' ,≤3'
20/10, 40/20, 60/40 scratch and dig
Right Angle Prism Yakarurama Angled Prism Kurudyi Angle Prisms Optical Prism Akarurama Angled Prism